Nagu saabsan - Medo Qurxinta Co., Ltd.
MEDO, oo uu aasaasay Mr. Viroux, waxay ujeedadeedu tahay inay bixiso adeeg hal-joogsi ah si ay uga caawiso dhismaha gurigaaga shan-xiddig leh qiimo jaban.
Laga bilaabo ganacsiga daaqada iyo albaabka, macaamiil aad iyo aad u tiro badan ayaa ku aaminay MEDO inay ka caawiso iyaga iibsiga alaabta guriga.
Si tartiib tartiib ah, MEDO waxay u dejineysaa warshad alaabta iyada oo loo marayo qalab si ay u bixiso adeeg hal-joogsi ah.
Maaddaama ay tahay soo saaraha hormuudka u ah daaqadda iyo nidaamka albaabka ugu yar iyo sidoo kale qalabka guryaha,
MEDO waxay bixisaa noocyo kala duwan oo badeecado ah si loo daboolo ku dhowaad dhammaan baahiyaha ka imanaya horumariyeyaasha, naqshadayaasha iyo adeegsadayaasha dhammaadka.
R&D joogto ah iyo naqshadaha hal abuurka leh ayaa naga dhigaya kuwa isbeddela warshadaha.
MEDO kaliya maahan wax soo saar, laakiin waa dhisme qaab nololeed.
Qaab-dhismeed gaar ah, tayada la xaqiijiyay
Iska caabin Pry, anti-fall, nabadgelyo dheeraad ah
Qalabka Premium, naqshad gaar ah
Kaydinta tamarta, dahaadhka dhawaaqa, amniga
Nidaamyada daaqadaha iyo albaabku waxay daboolaan ku dhowaad dhammaan daaqadaha iyo noocyada albaabbada ee suuqa, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn:
• Daaqadda daaqadda ka baxsan
• Daaqadda daaqadda sibidhka
• Janjeeri oo u leexo dariishadda
• Daaqadda sibidhka
• Daaqad isku mid ah
O Dibedda albaabka qaybta hoose
• Dhex gelinta albaabka qaybta hoose
• Albaabka oo fuulaya
• Albaabka u qaad oo is dul saar
• Albaabka sibidhka leexan kara
• Albaabka laabaya
• Albaabka Faransiiska
• Saqafka bannaanka iyo nidaamka hooska
• Qolalka qoraxda
• Darbiga daah iwm.
Noocyada mootada iyo gacanta ayaa la heli karaa.
Dahaarka birta ah ee birta ah iyo duufaanta qarsoon ayaa la heli karaa.
Iyada oo loo qoondeeyay daaweynta dusha sare, goomayaal qiimo sare leh iyo qalab waara.
Xirmooyinka alaabta MEDO waxay daboolayaan inta badan noocyada alaabta guriga oo ay ku jiraan fadhiga, kursiga firaaqada, kursiga cuntada, miiska cuntada, miiska akhriska, miiska geeska, miiska qaxwada, kabadhka, sariirta iwm, kuwaas oo si toos ah loo hagaajiyay.
Deegaan Nadiif ah oo aan Boor lahayn
Iyada oo leh warshad lagu buufiyo, warshadaha qalabka, xarunta been abuurka iyo saldhiga wax soo saarka alaabta guriga oo dhamaan ku yaalo Foshan, MEDO waxay ku raaxeysataa faa iidooyin waaweyn shaqaalaha xirfadleyda ah, silsilad sahaysan oo xasilan, qarash tartan iyo gaadiid ku haboon si ay uga caawiso macaamiisha inay ka kor maraan suuqa. Qalabka ceyriinka iyo qaybaha ayaa si taxadar leh loo xushay iyo heerarka ISO ayaa si adag loo raacayaa si loo hubiyo tayada deggan iyo gaarsiinta degdegga ah, si macaamiisha ay ugu raaxeysan karaan isla raaxada xitaa sannado badan ka dib.
Iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da tayada, adeegga iyo hal-abuurnimada, waxaan si xawli ah u ballaarineynaa shabakadeena iibka waxaanan raadineynaa la-hawlgalayaasha iyo kuwa wax kala qeybiya adduunka. Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto haddii aad xiiseyneyso! Kooxdayada ayaa kula soo xiriiri doonta 2 saacadood oo shaqo gudahood.
Kooxdayadu waxay si taxaddar leh u xushaan walxaha leh heerar sare oo si joogto ah u hagaajiya dhammaystirka faahfaahinta si ay u siiyaan macaamiisheenna alaabada mudnaanta leh iyo muddada dheer.
Adeeg dhan-wareega ah ayaa la heli karaa ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib iibka si loo siiyo macaamiisheena taageero farsamo iyo khibrad weyn.
Alaabtayadu waa mid ka mid ah dhacdooyinka horumarka dhismaha ugu yar yar, oo dhiirrigeliyay nashqadeeyayaal iyo naqshadeeyayaal aad u tiro badan. Alaabooyin cusub ayaa la soo bandhigi doonaa sanad walba iyada oo loo cuskanayo.